विचार/ब्लग Archives - hamrohealth
के हो घातक रोग स्क्र्ब टाइफस अनि कसरी वच्न सकिन्छ त डाक्टर राजन लुइँटेलको बिचार।
स्क्रब टाइफस एउटा घातक सरुवा रोग हो । यो रोग रिकेटसिया सुसुगामुसी नामको किटाणुका कारण हुनेगर्छ । यो रोगको सुरुवात जापानबाट भएको थियो । सन् १९३० मा जापानमा मियाजिमा मिकिनोसुकेले पत्ता लगाएको यो रोकको सङ्क्रमण पछिल्लो समय नेपालमा पनि फैलँदै गएको छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि यो रोगको सङ्क्रमण बढिरहेको छ ।
सुसुगामी नामको किटाणुका कारण सर्ने यो रोगका किटाणु चिगरमाइड्स भन्ने उपियाँ उडुस जस्ता साना किराले बोक्ने गर्छ । सो किराले टोकेपछि हाम्रो शरीरमा सार्ने गर्छ । खासगरी सुसुगामी किटाणु मुसामा हुने गर्छ ।
#जनचेतनाको लागि रातोपाटीबाट साभार।
सिमित समूहको स्वार्थ पुरा गर्न ल्याइएको यस्तो सम्रचनाले समग्र स्वास्थ्य अवस्था काहा पुर्याउला सोच्नै पर्ने बिषय बनेको छ।
निति बनाउने र ऐन नियम बनाउनेहरुले स्वास्थ्यको संबेदनसिलता बुझ्नु जरुरी छ। कसैलाइ हानी नपुर्याउने अझ आफ्नो क्षमता ले भ्याएसम्म जुनसुकै परिस्थितीमा बिरामीको उपचार गर्ने,निको पार्ने र रोकथाम गर्ने Hippocratic Oath लिएका मानिस हरु हौ हामी स्वास्थ्यकर्मी हरु। कर्मचारी समायोजन सकिएको हालको सन्दर्भमा हामिले बनाएको निति ( Organogram) कत्तिको बैज्ञानिक भयो र यसले भविस्यमा कस्तो परिणाम ल्याउछ त्यो समय ले बताउला।
समग्रमा भन्नुपर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय हाम्रो Apex Center हो जसले समग्र देशको स्वास्थ अवस्था कस्तो र कहा पुर्याउने भन्ने मार्गनिर्देश गर्छ र आवस्यक निति बनाउछ। हाम्रो चित दुखाइ कहा हो, भने २०७५/०९/०९ मा एक प्रकार को Organogram ल्याइयो र हामिलाइ समायोजनमा भाग लिन लगाइयो त्यसपछी सिमित स्वार्थको घेरा भित्र रहेर पुन तोड्मोड गरि २०७५/०९/२९ मा अर्को Organogram बनाएर कपट पुर्ण तरिकाले झुक्याइएको छ/ त्यसको क्षतिपुर्ती कहा बाट, कसरी लिने ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। सिमित समूहको स्वार्थ पुरा गर्न ल्याइएको यस्तो सम्रचनाले समग्र स्वास्थ्य अवस्था काहा पुर्याउला सोच्नै पर्ने बिषय बनेको छ।
एकातर्फ पुरानो स्तरवृद्धि लाई बढुवा जस्तो बनाएर बिना योग्यता जिम्मेवारी दिने र अर्को तर्फ स्तरबृद्धी लाई खारेज गर्ने गरि संघीय निजामती ऐन बनाउने कुराले कत्तिको न्याय गर्ला? बुझ्नुपर्ने बिषय बनेको छ। कोहि कर्मचारीलाई आफ्नो जागिर गर्ने अबधीभर अवसर दिइरहने र उपल्लो योग्यता भएको बरिष्ठ कर्मचारीलाई सधै सहायक स्तर मै राखेर कनिष्ठ बनाउने नियोजित खेलको पर्दाफास कहिले हुने ? त्यसको हिसाब किताब कहिले हुन्छ ? म सोध्न चाहन्छु। देश बिकेन्द्रीकरण र संघीयतामा गइसकेपछी केहि नयापन र फरकपन हुनुपर्छ अझ स्वास्थ सेवामा त यो एउटा सुनौलो अवसर नै हो / तथापी पनि यसले सोचेजस्तो र चाहेजस्तो नतिजा दिएजस्तो लाग्दैन। गुणस्तरीय स्वास्थ्य जनशक्तिको आवस्यक ब्यबस्थापनमा अझै पनि हाम्रो मन्त्रालय किन चुकेको हो, उत्तर खोज्ने बेला भएको छ।
प्रत्यक्ष जनसरोकार संग जोडिएको बिषयमा निति बनाउदा कालान्तर सम्मको परिणाम लाइ आन्कलन गर्नुपर्ने हो, यो किन हुन सकेन? के यस्तो सतही निर्णयले भोलीको स्वास्थ्य प्रणालीमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सक्ला? यि र एस्ता थुप्रै प्रश्नहरु तेर्सिसकेका छन।
नसर्ने र दिर्घ रोगको बृद्धी, गुणस्तरिय स्वास्थ्य जनशक्तिको समय सापेक्ष र युग सुहाउदो ब्यबस्थापन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा घट्दो बजेट, नया र emerging रोगहरु, प्राकृतिक प्रकोप र महामारि, स्थानिय सरकार र जनप्रतिनिधीको स्वास्थ्यमा कम चासो वा ठुलो ठुलो अस्पताल बनाएर मात्र स्वास्थ्य सेवा दिन सकिन्छ भन्ने भ्रम, स्वास्थ्यमा गरिएको खर्च लगानी हो भनेर बुझ्न नसक्नु, अत्याबश्यकिय र emergency सेवाको बिस्तार र पहुच नहुनु, निति निर्माण र कार्यक्रम Evidence Based बन्न नसक्नु, खोज र अनुसन्धानमा कम प्राथमिकता दिइनु, दिगो बिकास लक्ष्य प्राप्ती लगाएत बिबिध चुनौतीहरु स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप भइसकेका छन।
यि जटिल चुनौतीहरु बिच बाट अबको स्वास्थ्य क्षेत्रको बाटो तय हुनुपर्छ त्यसका लागी पनि Quality Health Manpower कै जरुरी हुन्छ। आशा गरौ अमुक मान्छेको फाइदाका लागी मात्र निति बन्ने छैन, एति सम्बेदन्शिल क्षेत्रमा राजनिती हुने छैन र चाडै बुद्धी फिर्ने छ…..!
लेखक : झम प्रसाद आचार्य, नमो बुद्द नगरपालिका, काभ्रेमा हे.अ पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ
के हो युनिभर्सल हेल्थ कभरेज? नेपालले लक्ष्य पूरा गर्न कस्ता छन् चुनौती?
काठमाडौं— आज विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो पटकको नारा ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज ः सबैजना, सबै ठाउँमा’ तय गरेको छ।
दिगो विकास लक्ष्यमध्येको एउटा प्रमुख लक्ष्य स्वास्थ्यमा पहुँच पनि हो। विश्वभरमा जस्तै नेपालमा पनि यही नाराका साथमा यो दिवस मनाइँदै छ।
धेरै नागरिक स्वास्थ्यको आधारभूत पहँुचभन्दा बाहिर रहेको अवस्था छ। गरिबीका कारण धेरैको पहिलो रोजाई गाँस, बास र लत्ता कपडाको जोहो गर्नु हो। यी कुराहरुको जोहो भएपछि मात्र मानिस स्वास्थ्यका बारेमा सोच्न सक्छन्।
नेपालको मात्र नभई यो विश्वव्यापी समस्या हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वका लाखौं मानिसको अझै पनि स्वास्थ्य हेरविचारमा कुनै पहुँच पुग्न सकेको छैन।
नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफूले निर्माण गर्ने नीति, नियम र कार्यक्रमहरु पनि दिगो विकास लक्ष्यलाई आधार मानेर निर्माण गर्ने गरेको छ।
मन्त्रालयले भर्खरै बनाएको स्वास्थ्यको पञ्चवर्षीय योजना पनि दिगो विकास लक्ष्यलाई आधार मानेर तय गरेको छ।
स्वास्थ्यमा हरेक सुमदायका हरेक नागरिकको सहज पहुँच पुर्‍याउने यो लक्ष्य नेपालले पूरा गर्न सक्ला त?
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा प्रमुख महेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्ः
सन् १९७७ मा सबै नागरिकले न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ भनेर कन्सेप्ट बनेको थियो।
त्यसको एक वर्षपछि सन् १९७८ मा भएको विश्व सम्मेलनले यो कन्सेप्ट पारित गर्दै कुनै पनि ठाउँको कुनै पनि नागरिक न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट बन्चित हुनुहुँदैन भनेर बोलेको थियो।
नागरिकले औषधि, स्थानीय महामारीको उपचार, स–साना चोटपटकको औषधोपचार, सबै प्रकारका खोप, पोषण, परिवार नियोजन सेवा लगायतका न्यूनतम सेवा पाउनुपर्ने कुरा बोलिएको थियो।
त्यो समयमा न्यूतनम स्वास्थ्य सेवाबारे बोलियो तर यसको आर्थिक पक्षका बारेमा केही बोलिएन।
आर्थिक रुपमा कमजोर भएकाले सेवा पाउन सक्दैनन् कि भन्ने कुरा पनि उठ्यो।
त्यसपछि सन् २००० मा भएको अर्को सम्मेलनले आर्थिक अभावका कारणले कोही पनि नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट वन्चित हुनुहँुदैन भन्यो। तर यो सम्मेलनले केके सेवा निःशुल्क हुने भन्नेबारे बोलेको छैन। ती सेवा हरेक राष्ट्रले आफ्नो आवश्यकता अनुसार दिनुपर्छ।
नेपालले यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क, स्वास्थ्य बिमा लगायतका कार्यक्रम लागू गरेको छ। आर्थिक अभावको कारण कोही पनि स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट बन्चित नहुन् भनेर विपन्न नागरिक उपचार, निःशुल्क औषधि, कडा रोगमा आर्थिक सहयोग पनि गर्ने गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सहश्राब्दी विकास लक्ष्यमा नेपालले पनि लक्ष्य प्राप्तिका लागि थुप्रै काम गरेको छ। यो लक्ष्य हासिल गर्न सफल हुने विश्वास पनि छ।
हरेक पालिकादेखि वडासम्म स्वास्थ्य सेवा दिन थालिएको छ। सोही अनुसार स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण पनि भइरहेका छन्।
हामीकहाँ यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि केही चुनौती पनि छन्। बोलेको जस्तै सजिलै लक्ष्य प्राप्त गर्न गाह्रो छ।
अझै पनि धेरै स्थानमा आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संस्था छैनन्। स्वास्थ्य संस्था भएका स्थानमा जनशक्ति छैनन्। स्वास्थ्य संस्था र जनशक्ति पुगेको स्थानमा आवश्यक औषधि उपचारका लागि उपकरणको व्यवस्था हुन सकेको छैन।
यी यावत् चुनौतीसँगै सबैलाई सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउन हामी सबैले आआफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ।
मन्त्रीज्यू, माफ पाउँ
कर्मचारी समायोजनका विषयमा हामी स्वास्थ्यकर्मीले कहिले समायोजनको सूची आउला भनेर व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेकै अवस्थामा कति पटक तपाईंलाई नराम्रो बचन समेत लगाइयो। बल्ल आज मैले थाहा पाएँ, वास्तवमा कर्मचारी समायोजन सकिएको विषयमा तपाईंले गरेको पत्रकार सम्मेलन सही रहेछl
कर्मचारी भनेको प्रशासन अन्तर्गतका कर्मचारी मात्र हुन्, उनीहरुको संघमा समायोजन भयो भनी घोषणा गर्नसक्नु अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य हो। यस्तो महान कार्य समापन गरेर संसारका देशहरुलाई छक्क पारेको कुरो मैले नबुझेको रहेछुl प्राविधिक कर्मचारीलाई एउटा दरबन्दी देखाई रोज्न लगाएको नाटक गरी पछि उक्त दरबन्दी संसोधन गरिएकोले समायोजन नमिलेको भनी सामान्य नागरिकले प्राप्त गर्नुपर्ने सूचनाको मौलिक हक (नेपालको संविधानको धारा २७) समेतबाट बन्चित गर्दा समेत केही नबोली आफ्नो काममा निरन्तर लागिरहने पनि कर्मचारी हुन सक्छन् र?
हो मन्त्रीज्यू, हजुरले गरेको कर्मचारीको परिभाषा सही रहेछl प्राविधिकहरु पनि कर्मचारी हुन् भन्ने कुरा यसअघि सूची आउट भएका शिक्षाका प्राविधिक कर्मचारी, नवौं, दसौं तहका उपसचिवहरु, संघअन्तर्गत रहेका स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (जो छैटौं, सातौं) तहको मातहतमा स्थानीय तहमा नै समायोजन भएका छन् त्यसबाट थाहा पाउनुपर्थ्यो।
त्यसैगरी समायोजन गरिएका महिला विकासका प्राविधिक कर्मचारी, जसको घरबार नै बिचल्ली हुनेगरी समायोजन ऐनले परिभाषित गरेको कुनै प्रकारले पनि समायोजन गर्न सकिने भन्ने पुष्टि हुने आधारसँग मेल नखानेगरी स्थानीय तहमा समायोजन भएको छ।
यस्तै कृषि तथा पशु स्वास्थ्यका प्राविधिक कर्मचारी र हालसालै गरिएको आठौं तहका स्वास्थ्यका कर्मचारी (मेडिकल अधिकृत) हरुको समायोजनको नतिजाबाट प्राविधिकहरु पनि कर्मचारी हुन् भन्ने मैले थाहा पाउनु पर्थ्यो। यति सानो विषय पनि जानकारी नराखी र आफूलाई एउटा प्राविधिक हो भन्ने नबुझी तपाईंप्रति गरिएको गालीगलोज सम्बन्धमा माफी चाहन्छुl
सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश ३ , हेटौंडा